SHALAKO - VAGAMON - YONKE BUNGALOW - I-Airbnb
SHALAKO - VAGAMON - YONKE BUNGALOW
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguMathew
ULUDWE OLUNTU LUHAMBA LUYAYISHWANKATHA NGOKUFANELEKILEYO NJENGEYONA NDAWO "ESENE" WAYE KUYO. IYAHLUKILE PHAKATHI KWEZITIMIYA ZETI EZIJONGE EZINGCWELE EZINGASENDWENI "SHALAKO" ILIZWE LAHLUKENEYO. INDLELA EKHOKELELA KWINDAWO YETHU IPHEPHA IMVULA UKUYA ENTLAMBO ENGAPHANTSI-NGAKUPHI NA USUKU OLUNIKWE NGAPHANTSI KWABANTU ABAYI-10 ABASEBENZISA LE NDLELA KWAYE IZITHUTHI ZIMBALWA KANYE. IMINININGWANE SINENKUNGU ESHIYILEYO EZIHLALA KWASEKUSENI IHLALE LIDE LIPHUME ILANGA. KUNYE NOMOYA - UMntla-MPUMA-UPHEZULU IMINI YONKE - UTHWALAZA NGOBUCHULE ENTLIZIYWENI..
Onke amagumbi abanzi kakhulu anefanitshala ekumgangatho ophezulu kunye nelinen yokulala. Onke anomnyango wawo wabucala kwaye aneebhalkhoni ezincanyathiselwe. Igumbi lokulala kumgangatho ophantsi linegadi ngaphambili kunye nendawo yokuhlala. Onke amagumbi okulala anamagumbi okuhlambela aneegiza zamanzi ashushu iiyure ezingama-24. Iketile / ibhotile yamanzi/ iti - Iingxowa zekofu/ iikomityi nazo ziyafumaneka emagumbini. Onke amagumbi okulala aneTV. Kukwakho ithala leencwadi kunye nendawo yokudlala enetafile yentenetya kunye netafile yePool. Ikhitshi lelinye langoku kunye ne-Rice cooker / itoaster / igesi / ifriji / i-mixie / i-oveni kunye nomatshini wokuhlamba. Izitya ezifunekayo zikwakhona. Iqula lokuqubha liyafikeleleka kumntu wonke .
Sinendlela ekhokelela encotsheni yenduli yethu ethi ijike iye ezantsi entlanjeni. Ngalo naluphi na usuku malunga nabantu abali-10 abasebenzisa indlela . Sinetempile encinci malunga ne-100 mtrs ukusuka kwipropathi - kodwa ivaliwe ixesha elininzi. Kukho iihektare ezi-8 ezibiyelwe ngaphandle kwegadi yeziqhamo ngaphambili enemithi yeziqhamo / iziqholo kunye neti ekhula kuyo. Kwaye kukho iigadi zeti ezingqonge ipropathi yethu. Yindawo ezolileyo yokuphumla ukuze uphumle kuyo. Silungiselela iJeep Safari ekuthatha ikuse kwiindawo ezine ezahlukeneyo zokubukela kwaye ngamava anexabiso.
Ndinendlu encinci kwipropathi kwaye ndifumaneka ngalo lonke ixesha xa undwendwe luhlala kwisakhiwo esikhulu